झार उमारेको सिसाको बाक्सामा टाउको राखेर के गर्दैछन् यी व्यक्ति ? « Nagarik Khabar
झार उमारेको सिसाको बाक्सामा टाउको राखेर के गर्दैछन् यी व्यक्ति ?
प्रकाशित मिति :5June, 2021 8:30 pm
एजेन्सी । कोभिड आउँदा जब यूरोपमा सरकारले मानिसहरुलाई दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा बेल्जियमका एक कलाकारले एक नयाँ जुक्ति निकालेका छन् । उनले मास्कको साटो यो अनौठो जुक्ति निकालेका हुन् । एलेन नाम गरेका यी व्यक्ति जब ब्रसेल्सका सडकमा निस्किन्छन् मानिसहरु उनलाई फर्कीफर्की हेर्ने गरेका छन् । उनले एउटा सिसाको बाक्सामा बिरुवा लगाएर टाउको त्यस बाक्साभित्र राखेका छन् । बिरुवाले फ्याँक्ने ताजा अक्सिजन सिधै लिन उनले यस्तो उपाय अपनाएका हुन् ।
उनले आफूले पहिलो पटक यस पोर्टेबल ओएसिस बनाउँदा यस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्न चाहन्थे । उनले मानिसहरुले आफूलाई निरस र घीन लाग्दो ठाने भने आफैंले आफूलाई यस्तै प्रकारले कैद हुन सकुँ भन्ने ठानेर बनाएको बताए । लकडाउनका कारण एकान्तवासले निरस बनेका मानिसहरु अब विस्तारै उनका नजिक आउन थालेको उनको भनाई थियो । ६१ वर्षका एलेनको यो उपाय १५ वर्ष पहिले नै आएको थियो । उनी ट्यूनिसियामा रहेको बेला त्याहाँका ओएसिस देखेर उनी प्रभावित बनेका थिए ।
उनलाई आफ्नो लक्ष्य पुरा भएको ठान्छन् । उनलाई मानिसहरु बडो कौतुहलतापूर्वक हेर्छन् र सेल्फी खिच्छन् । धेरैले यसलाई नयाँ आविस्कार पनि मानेका छन् । कतिपयले भने पर्यावरणका लागि चालिएको सकारात्मक कदमका रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरेका छन् । एलेन अहिले धेरै खुसी छन् । उनलाई उनको कलाकारिताबारे मानिसहरु सोधिरहका छन् । मानिसहरु यसैबारे चर्चा गर्ने गर्दछन् । मानिसहरुलाई उनी यहि त आभाष दिलाउन चाहन्थे ।